अब पहुँचवाला विरामीले मात्रै भर्ना हुन पाउने : RajdhaniDaily.com -
Home Uncategorized अब पहुँचवाला विरामीले मात्रै भर्ना हुन पाउने
काठमाडौं । कोरोना भाईरस संक्रमण पुष्टि भएका जटिल प्रकृतिका विरामीहरुलाई समेत भर्ना गर्न अफ्ठेरो हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारीस र समन्वयमा मात्रै काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुले आईसोलेसन र आईसियूमा भर्ना गर्न पाउने भएका छन् । के तपाईको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधीकारीहरुसंग सिधै पहुँच छ । यदि पहुँच छ भने मात्रै आइसोलेसन र आईसीयुमा विरामीले भर्ना पाउँछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै तोकिएका व्यक्तिहरुको सिफारीस र समन्वयमा मात्रै भर्ना लिन उपत्यकाका अस्पतालहरुलाई उर्दी जारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारी,डा.माधबप्रसाद लम्साल, डा.नवराज जोशी र डा.कुम्भराज जोशीको सिफारीसमा मात्रै अस्पतालमा कोभिड १९ का भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाका विरामीहरुले भर्नाका लागि अनुमति पाउनेछन् ।
एजेन्सी - May 2, 2021 0
Roshan Shrestha - May 2, 2021 0
उदयपुर । उदयपुरको बेलका नरपालिकामा ट्रयाक्टरबाट लडेर एक जनाको ज्यान गएको छ । बेलका नगरपालिका– १ आम्बासीमा को २ त ५१८२ नम्बरको ट्याक्टरबाट लडेर...
Breaking News Dhruba Lamsal - December 8, 2020 0
प्रदेश २ Kumar Raut - January 22, 2021 0
उदयपुरमा कोरोनाबाट दुई दिनमा ३ जनाको मृत्यु
Breaking News Sushila Bishwokarma - November 10, 2020 0
उदयपुर । उदयपुरमा कोरोना संक्रमणबाट सोमबार र मंगलबार तीन जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमित सबैको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा...
Breaking News Roshan Shrestha - March 14, 2020 0
कास्की । ‘टाइब्रेकर’मा नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै मनाङ मस्र्याङदी क्लबले पोखरामा सञ्चालन भएको १८औँ संस्करणको आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ...